Mpikarakara lanonana: “Mila mitady zava-baovao hatrany » hoy i Yohanna Traiteur | NewsMada
Raha vao miresaka lanonana, mby ao an-tsaina avy hatrany fa anisan’ny vanim-potoana iray miavaka sy manan-danja izay. Saro-pady sy mila fitandremana fatratra ny asa atao ho fanomezana fahafahampo ny tompom-pety, araka ny nambaran-dRakotovao Vololona “
Yohanna Traiteur ” anatin’ny sehatry ny asa. Efa maro ny lalana nodiaviny, vao tonga amin’izao sehatra izao ny tenany. Anisan’ny nahazoana traikefa ny fianarana sy asa, indrindra ny fifampikasohana amin’ny olona rehetra. “hentitra be aho refa miasa, ary tena miezaka manome tsara indrindra ka na misy olana aza eo amin’ny fanatanterahana ny asa dia tsy maintsy mahita vahaolana ary tsy misy fiantraikany tonga mihitsy any amin’ny tompom-pety. Miezaka mitady zava-baovao (creativité ) foana isaky ny “evenement” atao”, hoy izy .
Efa maro ny lalana nodiaviny
“Tamin’ny taona 1995 no nanomboka nianatra ny resaka cuisine – patisserie etc…. , tamin’izany dia natao ho fialamboly satria mbola mpianatra ka nanaraka ny fianarana lakozia rehefa fialantsasatra lehibe. Nahita fahafinaretana dia nanohy nianatra momba ny resaka fahandroana ary natao hatramin’ny resaka fandraisambahiny “Hotellerie et hebergement” . Ny taona 2002, nanana hevitra hanomboka hiditra tamin’ny sehatry ny fikarakarana sakafo “traiteur”, “nanao “cantine” ny niantombohana tamin’izany ary niasa tamina mpanao mofo lehibe teto an-drenivohitra, izay nahitako sy nahazoko traikefa be”, raha ny filazany . Ny taona 2010 no niforona ny Yohanna traiteur ary niompana kokoa amin’ny resaka lanonana sy seminaire etc….Ary nanitatra ny asa dia lasa mpikarakara lanonana “organisateur evenement” , indrindra ny mariazy fa manao ny “evenement” rehetra ihany koa ny tenany. Tombony betsaka ho azy ny niasa tamin’ny toerana efa manana ny maha izy azy, niara-niasa tamin’ny olona efa nanana traikefa an-taonany maro. Mandra-kankehitriny, miezaka hatrany mba hivotra amin’ny zavatra ataony ary mbola manohy fianarana hatrany i Yohanna Traiteur , araka ny nambarany.